Mafampàna ny sehatra media sosialy satria milaza amin’ny filoha Erdogan ny Tiorka hoe “ampy izay” · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 14 Mey 2018 5:43 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Français, Ελληνικά, русский, Italiano, English
An'arivony no nanao fihetsiketehana tao Istanbul mba hanohitra ny kolikoly sy ny fitondran'i Erdogan, Desambra 2013. Sora-baventy ahitana ny sarin'i Fethullah Gulen sy ny praiminisitra Erdogan, ary mivaky hoe “tsy tsara kokoa noho ilay iray ilay hafa”. Fulya Atalay ao amin'ny Demotix.
Ora vitsy monja no nahafantaran'ny filoha Tiorka, Recep Tayyip Erdogan ny hadisoana nataony nandritra ny fitenenany tamin'ireo mpikambana ao amin'ny antokony tao Ankara tamin'ny 8 Mey.
Niresaka ny tenany voalohany tamin'ny fampiasana ny “izy”, nilaza ny Filoha Erodgan hoe: “Zavatra iray no kasain'ny fahavalony – handrava an'i Recep Tayyip Erdoğan.”
Hoy izy nanohy: “Raha miteny ny firenentsika indray andro any hoe “tamam“, dia hifindra eo an-kilany isika”.
Amin'ny teny Tiorka, ny “tamam” midika hoe “ampy izay”. Ary izany indrindra no nolazain'ny Tiorka ho setrin'ny filazana nataon'ny filoha.
Ankilan'ireo mpanohitra ara-politika an'i Erdogan mahateny, mpikambana marobe eo amin'ny vahoaka amin'ny ankapobeny no niditra Twitter mba hilaza hoe “ampy izay”. Nalaza manerana izao tontolo izao sy manerana an'i Torkia ny #Tamam tamin'ny 8 sy 9 Mey.
T A M A M nisy nizara maherin'ny in-1 tapitrisa.
Ho valifaty, nanomboka nahazo hery ihany koa ny tenirohy “#Devam” midika hoe “mitohy” na “manohy”. Saingy tsy mitovy mihitsy ny fampitahana ireo tenirohy roa ireo.
Nanaraka ireo tenirohy roa sady nizara ity i Akin Unver, mpiara-miasa ao amin'ny Fandaharan'asa momba Fikarohana Antserasera ao amin'ny Ivon-toeran'ny Fikarohana Politika Ivelany sy Ara-toekarena :
Fifantohan'i Istanbul: 1) #TAMAM 2) #DEVAM
Fifantohan'i Ankara: 1) #TAMAM 2) #DEVAM (roboto maro loatra, ahitana votoaty an-jatony 100 ny ankamaroan'ny teboka)
Noho ny fangatahan'ny besinimaro; sarintany sasany fitsinjarana tsotra momba ny #TAMAM mifandrina amin'ny #DEVAM ao Torkia; iray amin'ireo ady tenirohy ara-politika lehibe indrindra teo amin'ny tantaran'ny aterineto.
1- #TAMAM manerantany
2- #DEVAM manerantany
3- #TAMAM eo amin'ny firenena
4- #DEVAM eo amin'ny firenena
“Iray amin'ireo ady tenirohy ara-politika lehibe indrindra teo amin'ny tantaran'ny aterineto” ny #TAMAM sy #DEVAM no hita ao Torkia .
Jereo bebe kokoa 👇https://t.co/z2wviYuKe6
Mino izahay. Ity no fanapahankevitsika farany [Hoy ny vakin'ny eo ambony: Mino ve ianao fa te hivoaka? Eny na Tsia
“Inona no nataoko?” T A M A M #Tamampic
Ny hafa indray niantso ny hanesorana ny filazana hamehana (tany misy hotakotaka) ao Torkia – izay ampiasan'i Erdogan hanamarinana ny fifidianana mialoha, kasaina hatao amin'ny 24 jona izao – mba hisian'ny fifidianana malalaka sy marina any Torkia.
OHCHR | Tsy maintsy manaisotra ny “firenena latsaka an-katerena” i Torkia mba hisian'ny fifidianana madio
Nampiasa ny tenirohy koa ny mpamorona an'i Wikipedia Jimmy Wales mba hiantso an'i Erdogan hanaisotra ny fandraràna ny Wikipedia, izay nakatona nandritra ny herintaona tao Tiorkia.
Tiako i Tiorkia. Tiako ny kolontsaina sy ny vahoaka Tiorka. Ny tanàna mahafinartr'i Istanbul … sakafo matsiro, divay tsara, kolontsaina lehibe. Miantso an'i Erdogan aho mba hanokatra ny Wikipedia ary hihaino ny vahoaka!
Nanao ny lalany tao amin'ny Instagram ihany koa ny #Tamam:
Haingana avy hatrany ireo manampahefana nitsipaka ny fitomboan'ny fanohanana ny “tamam” antserasera ary nilaza fa nalefan'ny raboto manam-pifandraisana amin'ny PKK sy FETO ny hafatra.
Nilaza ny mpitondra tenin'ny AKP, Mahir Unal hoe:
Ny ankamaroan'ny sioka amin'ny tenirohy TAMAM dia navoaka avy amin'ireo firenena mampavitrika ny FETÖ sy ny PKK. Kaonty raboto izy ireo. Azonay takarina (kôpy) ny (ataon'i) Gresy. Ahoana kosa ny amin'ireo ao an-tanindrazana? ‘
Nilaza ny mpitondratenin'ny filoha İbrahim Kalın nandritra ny valan-dresaka tamin'ny mpanao gazety tamin'ny 9 mey hoe:
Tsy hisy vokany ny fanafihana amin'ny alàlan'ny raboto media sosialy. Mihevitra ny zava-misy isika, fa tsy ny tontolo virtoaly. Mino isika fa hilaza hoe ‘mitohy’ ny firenentsika. Tsy zava-dehibe amintsika izany. Ny olom-pirenena no hanana ny teny farany amin'ny fandahatsam-bato.
Praiminisitra lefitra Bozdağ: “Manonofy ry zareo [milaza #Tamam], ho andro hivadihan'ny nofinofin'izy ireo ho nofiratsy ny 24 Jiona.”
Ny Minisitry ny raharaham-bahiny Mevlut Cavusoglu kosa nampiasa ny #Devam mba hanipika fa miankina amin'ny filoha Erdogan ny ho avin'i Torkia.
Manana fanantenana lehibe sy fitiavana lehibe isika! Amin'ny tolontsika voatahy ho an'i Torkia feno fanambinana sy matanjaka
Sary eo amin'ny lahatsoratra: Sehatra velona iombonana, fitiavana iraisana, lasa iraisana, hoavy iombonana i Torkia.
Nitondra an'i Torkia nandritra ny 15 taona ny filoha Erdogan. Nitaky fifidianana mialoha ihany koa izy, izay hotontosaina amin'ny 24 Jiona. Raha mandresy amin'ireo fifidianana ireo izy, dia hitoetra eo amin'ny fitondrana mandritra ny fito taona manaraka indray i Erdogan.